एक विवाह को लागि खेल - को fullest गर्न मजा!
विवाह - एक युवा परिवारको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक छ! र, पाठ्यक्रम, तपाईं सधैं यो मजा सजिलो थियो, र नवविवाहितहरूका रूपमा ठूलो खुशी हुनेछ, र अतिथि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। पुरातन समयका भएकोले त्यहाँ विभिन्न खेल र सञ्चालन गर्न ठूलो स्लाव भाषाहरु परम्परा छ , प्रतियोगिताहरु विवाह मा सबै अतिथि को पागल कार्यहरू भाग।
विवाह मा खेल फरक चरित्र हुन सक्छ: बाट सबैभन्दा निर्दोष र हास्यास्पद, सामान्यतया साँझ सुरु र रात नजिक कामुक छाया संग प्रतियोगिता समाप्त (अक्सर खपत रक्सीको मात्रा मा निर्भर गर्दछ!)। तिनीहरूले केही विकल्पहरू विभाजित छन्:
- युवा को लागि प्रतियोगिताहरु;
- साक्षी लागि प्रतियोगिताहरु;
- आमाबाबुको लागि प्रतियोगिताहरु;
- अतिथि लागि प्रतियोगिताहरु।
त्यहाँ रमाइलो र प्रेमी वा कुनै पनि अतिथि गर्न toastmaster वा विवाह रात को मास्टर, र प्रेमी रूपमा प्रदर्शन हुन सक्छ कि रचनात्मक कार्यहरू को एक विशाल विविधता छ। मुख्य कुरा सहभागीहरू हास्य हुन्छ कि सबै कुरा बुझ्ने र सबै सिलिन्डरहरु मा दूर भङ्ग छ! त्यहाँ सधैं तिनीहरूलाई सारा भीड बनाउन सक्छ कि कुनै पनि कम्पनी मा मान्छे को एक जोडी छ र यो खेल विवाह केही ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
खेल जवान द्वारा प्ले छन्।
नव गरे पति र पत्नी त्यस्तो रोमाञ्चक जिम्मेवारी प्रस्ताव - एक लेख्न "स्वागत भाषण" पाहुनाहरूको लागि। एकै समयमा यो शब्द को एक किसिम प्रदान गर्दछ, उदाहरणका लागि, घर, हात, टेबल, कार, पानी, आदि को लागि, तिनीहरूले प्रस्ताव समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं शब्द रोचक चयन गर्न सक्नुहुन्छ। लिखित end शब्दहरू अन्य बहिनीहरूको ठूलो स्वरले पढ्न गर्दा तिनीहरूले प्रस्ताव लेखिएको कागज को एक टुक्रा मा पालैपालो लिनुहोस्, र। रमाइलो बाहिर जान्छ!
यो पनि भविष्यमा बच्चा को हेरविचार गर्ने क्षमता मा एक पति र पत्नी बीचको प्रतिस्पर्धा पकड रोचक हुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई लागि दुई गुडिया र लुगा आवश्यक हुनेछ। पहिलो राम्रो पुतली पोशाक हुनेछ थियो, त्यो जित्यो। यो अचम्मको छ, तर सामान्यतया, यो एक महिला छ!
तपाईं पनि पहिलो एक युवा परिवार मा जन्म, विवाह मा खेल छ जो बाहिर पाउन सक्नुहुन्छ। युवा एक अपारदर्शी झोला, जहाँ छन् ल्याउँछ केटाहरू लागि खेलौनाहरू र बालिका। तिनीहरूले पहिलो बाहिर झिकेर चपाउनु खेलौना, उहाँले जन्म हुन्छ।
खेल भनेर आमाबाबुले खेल्छन्।
यहाँ हामी आमाबाबुले तिनीहरूलाई अलग प्रतिक्रिया सक्छ रूपमा, एक काम छान्ने धेरै होसियार हुनुपर्छ।
आमाबाबुको लागि सबैभन्दा दयालु र आनन्द प्रतियोगिताहरूमा "मा-व्यवस्था पत्ता" वा आमाबाबुले आवाज आफ्नो नयाँ बच्चा पर्छ जो आवाज अनुमान गर्नुपर्छ जहाँ "छोरी पाउन बाहिर" छ।
सुन्दर प्रतियोगिता, कुनै एक indifferent छोड्न हुनेछ जो पनि आमाबाबुले संग नाच छ। सासू आफ्नो छोरा र बुहारी संग नाच छ। र संगीत नृत्य समयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईं संगीत को राम्रो चयन बनाउन भने, प्रतियोगिता एक प्रमुदित मजा हुनेछ।
टाढा प्ले छन् खेल।
प्रतियोगिताहरूमा र विवाह को लागि खेल र अधिक ल्याउन विकास मा एक युवा परिवारको बजेट पूरक गर्न। यो सक्रियतासाथ आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई मदत गर्न सक्छ। साथै, यो रमाइलो छ, र कुनै एक यो स्वैच्छिक छ कि संदेह।
आगंतुकों लागि एक अद्भुत गतिविधि - (! आफ्नो सहमति को पाठ्यक्रम,) विभिन्न साना कुराहरू नवविवाहितहरूका धेरै रूपमा जो सेट गर्न सकिन्छ एउटा लिलामी, वा विवाह देखि स्मृति चिन्ह कुनै पनि अन्य trinkets।
वित्तीय स्थिति नवविवाहितहरूका र बच्चाको भविष्यमा सेक्स को एक विकल्प संग एक प्रतियोगिता मदत गर्नेछ सुधार। यो गर्न, यो Sliders लिन दुई रिबन (रातो र नीलो) तिनीहरूलाई बाँध, क्रमशः अतिथि त्यहाँ केटा वा केटी मा राख्न पैसा।
जब अतिथि राम्रो पेय र आराम साथै प्रत्येक अन्य थाह, एक रूपमा विवाह मा यस्तो रमाइलो खेल को संभावना "परी कथा।" यो अतिथि, विशिष्ट तोकिएको प्रत्येक थुप्रै समावेश एक परी कथा मा वर्ण, र यो अनुसार आफ्नो चरित्र को प्रकृति संग भूमिका खेल्न गर्नुपर्छ। कथा नेता बताउँछ, र वर्ण इशाराहरू र कार्यहरू यसलाई देखाउँछ। यस मामला मा, facilitator हास्यास्पद वर्ण को कार्यहरू टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, पाठ को Tales, साथै वेशभूषा अग्रिम बाहिर लाग्यो छन्।
को "स्वीडिश" मोडेल मा जोडे
प्रारम्भिक विवाह - फाइदा र नोकसान
जवान विवाह को दृष्टान्त। विवाह बधाई र toasts
या त, न: प्रयोग, नियम, उदाहरणहरू, र व्यायाम
प्रकार र प्रयोगहरू: देखि प्लास्टिक कार पलिश खरोंच
प्रत्येक घरमा सौन्दर्य को एक टुक्रा - कसरी पात बाट शिल्प बनाउन
ट्राउट पखालमा पकाइएको
एक निर्देशन प्रविधि: छत को स्थापना। आफ्नो हात संग छत को स्थापना